Akananqubekela phambili owavalelwa umazisi | News24
Akananqubekela phambili owavalelwa umazisi
USEPHILA ngamatoho owavalelwa umazisi ngabo Mnyango wezaseKhaya ngenxa yokusolakala ukuthi akasiye owakuleli.
UMnuz Simon Phiri (65) wase-France eMgungundlovu uthe impilo yakhe ayinayo inqubekela phambili selokhu athola ukuthi umazisi wakhe uvaliwe ngo-2015.
Ekhuluma nentatheli yephephandaba i-Echo uMnuz Phiri uthe wethuka izanya ngesikhathi ethi uya ebhange ngo-2015 bemtshela ukuthi umazisi wakhe awusebenzi ngenxa yokuthi uMnyango wezaseKhaya uwuvalile.
Uthe ngemuva kokuthola lezi zindaba ezishaqisayo wahamba waya ehhovisi loMnyango wezaseKhaya eliku-Church Street ukuyothola izimpendulo.
Uthe: “Ngafika khona ngabachazela ukuthi ngithole umbiko wokuthi umazisi wami uvaliwe ngaphandle kwemvume yami. Bangithatha izithupha kwathiwa angibuye ngemuva kwamasonto amabili.
“Uma sengibuya bangitshela ukuthi angihambe ngiyolanda ubufakazi babazali bami ukuze bezoba nesiqiniseko sokuthi ngingowakuleli. Abazali bami sebashona ngakho ngabanikeza izitifiketi ezishoyo ukuthi abasekho emhlabeni,” kuchaza yena.
Uqhube wathi ngemuva kokubona ukuthi akalutholi usizo eMnyangweni wezaseKhaya waqoka ukubhalela ihhovisi lamaLungelo aBantu (Human Rights) kodwa bamudlulisela kuMvikeli woMphakathi (Public Protector).
“Uma sengibuyela kuMnyango wezaseKhaya bangithatha izithupha futhi, bathi kungenzeka ukuthi kukhona omunye onenombolo kamazisi efana neyami yingakho owami umazisi uvaliwe. Emuva kwalokho bangitshela ukuthi kuvela ukuthi angisiye owakuleli, ngingowasezweni laseMalawi yingakho umazisi wami uvaliwe.”
UMnuz Phiri uthi akasazi ukuthi enze njani njengoba noMnyango wezaseKhaya ungamusizi.
Uthe wazama ukuthola usizo kummeli kodwa kwanhlanga zimuka nomoya.
“Mina ngazalelwa kulelizwe ngakhulela la angikaze ngiye ndawo. Ngisho isitifiketi sami sokuzalwa siyasho ukuthi ngingowala. Okungixakayo ukuthi kungani kuzovela manje ukuthi angisiye owakuleli. Angikwazi ngisho ukubhalisela impesheni sengiphila ngamatoho ukuze ngithole imali. Ngiyaludinga ngempela usizo.”
Okhulumela uMnyango wezaseKhaya eMgungundlovu uMnuz Thabo Mokgola uthe udaba lukaMnuz Phiri seludluliselwe kwimenenja yesifundazwe yalo mnyango.
“Imenenja izoqoka ithimba elizoxhumana noMnuz Phiri ukuthola eminye imininingwane ngalolu daba ukuze luzoxazululwa,” kusho uMnuz Mokgola.